Obbo Ibsaa Guutamaa: Yeroo cehumsaa Afaan Oromootiin akka baratamuuf quuqamaan hojjenne - BBC News Afaan Oromoo
Yeroo mootummaa cehumsaatti Ministira Barnootaa ta'uudhaan kan tajaajilan Obbo Ibsaa Guutamaa turtii BBC'n akkaataa Jalqabbii barnoota Afaan Oromoofi dhimmoota hedduu biroorratti taasise kunooti.
BBC: Dhaloota Fidalaafi Dhaloota Qubee yeroo jettan dhaga'amtu. Maal jechuudha?
Kanaafuu warri lafaa dhufu bakka qabachuu qabuun jedha. Amma aadaa keenyaan deemaa hin jirru. Akka alagaan nuuf kaa'etti ijaaramnee deemaa jirra. Kanaaf bakka waliigadhisuun kuni kan hin baratamneef. Haalli kuni geeddaramee bakka walii gadhiisuun dirqama taha.
BBC: Waa'ee ministeera barnootaa hoggantanii maal yaadattu?
Obbo Ibsaa: Ministeera barnootaa ta'uun wagga tokkoofin tajaajile. Turtii waggaa tokkoo kanatti bara itti aanutti manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hundi barnoota Afaan Oromootiin akka barsiisan kitaabota qopheessaa turre.
Ji'oota afur hin caalle keessatti qopheesinee xumurre. Pirojektii kanaaf beektonni Oromoo hundi birmataniiru. Keessumaa barsiisonni hojii kooti jedhanii halkaniifi guyyaa hojjetaniiti saffisaan kan qophaa'e.
Obbo Ibsaa: Yeroo ABO'n mootummaa cehumsaa keessaa bahe ani walgahii UNESCO tokko irratti hirmaachuufin biyya alaan ture.
Osoon achi jiruuyi kan 'mootummaa cehumsaa keessaa baaneerra, ofii keetii murteessi waan gootu, deebi'uufi achitti hafuu' kan jedhu naaf dhaaman.
Akka yeros natti himanitti Mallas Zeenaawwiin Obbo Diimaafi Obbo Leencoo waameetu 'ani eegumsa isiniif gochuu hin danda'u, biyyaa bahaa' jedheen.
Obbo Ibsaa Guutamaa, Hayyuufi qabsaa'aa
BBC: Walaloo 'Itoophiyaawii maannew' maalirraa kaatanii barreessitan?
Kanaafin 'Itoophiyaa, Itoophiyaawii…' jechaatii deemuun garuu sabni kaan kan akka Oromoo, Aanyuwaak fi kan biroo dhuguma Itoophiyaadhaayii? Kan jedhu gaaffii kaasuufin barreesse. Gaaffii kanaafis deebiin argamuutu irra jira kan jedhudha kaayyoonsaa.
Obbo Ibsa: Ani ofii kootiif yeroo sanayyuu deebii isaa nan beeka. Itoophiyaawiin eenyu akka ta'e yerosuu deebii argadheera. Garuu hamma yoonaatti namni gaaffii sanaaf deebii kenne hin jiru.
Obbo Ibsaa: Wanti amma mul'atu nama gaddisiisa. Nuti kan dhufne nagaadhaan qabsaa'uuf.
'Itoophiyaa keessa mootummaa tokko qofatu jira’
'Biyya galuun ABO abdii horatame hinfinne'
Amma yeroo nuti gara Oromiyaa dhufnummoo rakkinatu jira. Maaliif akka rakkoon kuni uumame, eenyuufi eenyu gidduutti akka ta'eyyuu waanuma odeefamurraa kan hafe hin beeku.
Dhugaan jiru garuu uummati keenya kallattii garagaraa jiru buqqa'aa, du'aa fi rakkoof saaxilamaa jiraachuudha.Nageenyi bu'uu qaba. Nageenyi cehumsa kana milkeessuuf durfannoo jalqabaa waan ta'eef.
Obbo Ibsaa: Ani ABO dha. Jireenyikoos, hamma dhumaattis ABO dha. ABO'n meeqas haa tahu, abbaan barbaades ciratee haa fudhatu, ABO'n tokkichuma mataakoo keessa kan jiru.
Garuu, ABO'n salphaa miti Oromoodhaaf. Ijoollee baayyee itti wareege, waggoota shantamman darban wareega guddaatu bahe. Beektota keenya meeqa dhabne, jaallan koo warran beeku meeqatu dhume? Ana malee kan hafe jirayyuu natti hin fakkaatu.
Kana kana yeroo ilaaltu ABO ebeluu, jettee waan asiifii achi qabdu miti. ABO'n Ayyaana Oromoo keessaa tokko jedheen fudhadha ani. Namni sababa ABO tiin hin tuqamne tokkollee hin jiru, qe'een maqaa ABO tiif hin miidhamne tokkollee hin jiru.
BBC: Afaan Oromoo Afaan hojii Federaalaa akka ta'uuf haaldureen barbaachisu maali?
Obbo Ibsaa: Oromoon saba guddadha. Mootummaan kuni kan magaala guddoosaa qabu Oromiyaa keessaayi kanaaf Oromoon bu'aasaa argachuu qaba.
Magaalasaa keessa ta'ee afaan isaatiin hin dubbatamu taanaan rakkisaadha. Afaan Oromoo afaan Federaalaa ta'uu dhabuusaatiin ijoolleen Oromoo hojii Federaalaa hin argattu.
Kanaafuu afaan Federaalaa ta'uu qabaadha malee halduree waan jedhamu homaa hin barbaachisu.
Obbo Ibsaa: Yeroo sana dhaabbonni biyya keessa jiraniifi ABO'n Paarisitti walgahiitu ture. Walgahii kanarratti murtee tokkorra geenyee turre. Murteen kunis konfiransii guddaa biyyatti gallee qopheessina kan jedhudha.
Dhaaba ABO dura bu'ee kan dhufe ana ture. Biyya dhufee gara mana kiyyaan deeme. Mana kiyyatti loltoonni hedduun dhufanii na fuudhanii deemuun mana hidhaa nagalchan.
Yeroo sana ani hidhamuukootti nama baay'eetu ka'ee ture. Mana murtii yeroon jalqaba dhaqe, guutuunsaa nama keenya duwwaadha ture.
Obbo Ibsaa: Duraan 'website' tokkon qaba isarrattin waan sammuu koo keessa jiru yaada garagaraa barreessaan ture. Ammammoo erga 'facebook' dhufee achirraa odeefannoo nan argadha, ofiikoofis yaada mataa kiyyaa yeroo tokko tokko nan barreessa.